दिव्या भारतीका अन्तिम ६० मिनेट, को थियो साथमा?::आर एम खबर
दिव्या भारतीका अन्तिम ६० मिनेट, को थियो साथमा?
- | आर.एम. खबर
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री दिव्या भारती ती शानदार कलाकार मध्ये एक हुन् जसले छिटै यो संसार छोडे । उनी जम्मा १९ वर्षकी जब अफार्टमेन्टको पाँचौ तलबाट खेसर उनको मृत्यु भयो ।
५ अप्रिल १९९३ मा उनले जीवनको अन्तिम सास लिएकी थिइन् । उनको मृत्युको रहस्य हालसम्म पनि पूर्ण रुपले खुलेको छैन । उनको ४५ औं पूण्यतिथिका अवसरा उनको जीवनको अन्मि ६० मिनेटबारे जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।चेन्नईबाट शूटिंग गरेर फर्केकी दिव्यालाई एक अन्य शूटका लागि जानु थियो । तर उनले त्यसलाई स्थगित गरिदिन् ।
उनकी डिजाइनर नीता लल्लाको एक फोन आयो जो उनीसँग भेटेर अपकमिंग फिल्म आन्दोलनका लागि उनको कस्ट्यूम तय गर्नेवाली थिइने । नीता र उनका साइक्याट्रिक श्रीमान श्याम लल्ला दिव्याका घरमा थिए जब उनको पाँचौ तलाबाट खसेर मृत्यु भयो ।
तीनै जना ड्राइंग रुपमा बसेर मदिरा सेवन गरिरहेका थिए ।
दिव्या निकै मातिसकेकी थिइन् । दिव्याको घरमा काम गर्ने अमृता किचनमा थिइन् र केही स्न्याक्स बनाउँदै थिइन् । जुन तीनै जनाले मदिरासँगै लिने थिए । अमृता किचनबाटै दिव्यासँग कुरा पनि गरिरहेकी थिइन् । त्यो बला नीता र श्याम टिभी हेरिरहेको पनि दाबी गरिन्छ, जब दिव्या चुपचाप बालकोनीमा गइन र रेलिंगमा अडिइन् ।
जब उनी मोडिइन् अचानक सन्तुलन विग्रेर उनी त्यहाँबाट खसिन् । जब प्यारामेडिकल टीम त्यहाँ पुग्यो त्यतिबेलासम्म दिव्या जीवितै रहेको बताइन्छ ।
तर दिव्याको मृत्युपछि धेरै प्रकारका षड्यन्त्रका अनुमान पनि गरिए । एक म्यागजीनसँग कुरा गर्दै दिव्याका बाबुले भनेका थिए, ‘सुसाइड र हत्या जस्तो केही पनि होइन । हो, उसले थोरै मदिरा पिएकी थिइ । तर तपाईँ आधा घण्टामा खासमा कति मदिरा लिन सक्नुहुन्छ ?’
उनले आफ्नाी छोरी डिप्रेशनमा नभएकोसमेत बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘उ त्यो किसिमकी केटी थिइ जसले अरुलाई डिप्रशन गराउँन सक्थी ।’ उनले यो एक दुर्घटना भएको बताए ।
उनले भनेका थिए, ‘उ रेलिंगमा बसी आफ्नो सन्तुलन हराएपछि खसी । दुर्भाग्यवश सबै फ्ल्याट्समा ग्रिल लगाइएको थियो बाहेक दिव्याको फ्ल्याट । हरेक राती फ्ल्याट्सको तल निकै गाडी हुन्थे, त्यो दिन एक पनि गाडी थिएन । म बेहोश भएको थिएँ । तर, अन्ततः हामीले वास्ताविकताको सामना गर्नै पर्छ ।